Vaovao farany momba an’i Hoder · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2019 5:50 GMT
Nosamborina tany Iran i Hossein Derakhshan, Hoder araka ny tranonkala Jahan News ao Iran. Araka io tranonkala io ihany, i Derakhshan izay nankany Israely talohan'izay dia niaiky momba ny fitsikilovana an'io firenena io . Tsy loharanom-baovao azo antoka anefa ny tranokalam-baovao Jahan. Tsy hahita ianao tranonkala matotra na sampam-baovao matanjaka izay milaza ny vaovao hitanao ao.
Navoakan'ny Irna, tranonkala ofisialin'ny Repoblika Islamika ny karazana fanambarana avy amin'i Hossein D. mikasika ireo mpanao gazety reformista any an-tsesitany. Ho hitanao eto ny fandikan-teny momba izany.
Nanoratra ny tokony hanohanana azy ny bilaogera sasany raha toa ka any am-ponja izy na dia eo aza ny zava-misy fa nanohana ny governemanta Islamika foana izy tamin'ny ankapobeny.
Mihevitra aho fa teoria fotsiny ihany ny fisamborana azy.
Dikantenin'ny famoaham-baovao iray nivoaka tamin'ny 17 Novambra 2008 ity manaraka ity izay navoakan'ny tranonkala ofisialin'ny Repoblika Islamika, Irna:
Nilaza ny fanambarana farany nataon'ireo olona “nitsoaka nofitahina” izay notaterin'i Hossein D., iray amin'ireo olona nofitahin'ny hetsika reformista, izay nandositra an'i Iran taona maro lasa izay, ary nanoratra ho fanoherana ny finoana mampatahotra an'ireo Iraniana hoe:
Efa telo taona lasa izay, maro tamin'ireo namako nandray anjara tamin'ny gazety reformista ho mpanoratra sy mpanao gazety no norisihana handao ny firenena ary hanoratra hamely ny Velyate Faqih, ny Imam Nafenina, ary ny tsy fisian'ny fahalalahana ao Iran, ary nomena vola ho antoka [nofitahina tamin'ny fanomezana vola].
Ankehitriny, miaina ao anatin'ny olana ara-bola ratsy indrindra izy ireo. Araka an'i Hossein D. maro tamin'ireo “olona nofitahina” ireo no nampiasa fanafody mampitony, ary efa nanandrana namono tena indray mandeha na indroa ny sasany tamin'izy ireo .
Nampiany ihany koa fa ankoatra ny olona roa na telo izay tsy fantany ny fiveloman'izy ireo, ny ambiny dia noterena hiasa ho mpanety, mpamily ary mpandroso sakafo, ary mahaliana fa [manoratra ] ao amin'ny tranonkala manohitra ny Iraniana izy ireo miaraka amin'ny sariny manohitra ny IRI sy Ahmadinejad ary mandray vola amin'ny zavatra soratany.
Noantitrateriny fa nanohy nangataka azy ireo hiasa foana manohitra ny zavatra vitsivitsy ireo Tandrefana : ny Velayate Faqih, ny finoana ny Imam nafenina, ary ny fondamentalista. Ary miteny izy ireo rehefa tsy manoratra izay tadiavin'ny Tandrefana ny olona ​​hoe rahony sy hangalao vola izy ireo ary hampitahory fa hamoaka ny porofo izahay [Tandrefana] hanenjehana anareo raha tsy manoratra izay tadiavinay ianareo.
Miaina amin'ny olana goavana ara-bola sy ara-tsaina ny sasany amin'ireo namako ary mety maniry ny hahafatesany mihitsy aza matetika.